Tariby momba ny tantaram-pahaterahana ao Taribo West Plus tsy fantatra
Home TORO FARANY AFRICAN Mpilalao Football Nizeriana Tariby momba ny tantaram-pahaterahana ao Taribo West Plus tsy fantatra
TORO FARANY AFRICAN
Ny LB dia manolotra ny rakitsoratra feno momba ny Lalao baolina kitra malaza amin'ny anaram-bosotra; "Pastor". Ny tantaram-pahaterahan'i Taribo Westhood momba ny tantaram-piainana mihoatra ny tantaram-piainan'ny tantaram-piainana dia mitondra ny fitantarana feno momba ireo zava-nitranga voamarikao hatramin'ny andron'ny fahazazany hatramin'izao. Momba ny tantaram-piainan'ny androm-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana, ny tantaram-pianakaviana, ny fomba nahatonga azy ho pasitera ary maro ny zavatra fantatra momba azy momba ny OFF sy ON-Pitch.
Eny, ny rehetra dia mahatsiaro azy noho ny volony lavalava sy ny lozam-pifaliana. Na izany aza, mpankafy vitsivitsy ihany no mahafantatra betsaka momba ny Bio Bio-Taribo Andre izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, andao hanomboka.
Taribo West Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
Teribo West dia teraka tamin'ny andro 26 tamin'ny mars 1974 tany Port Harcourt, Nizeria. Tahaka ireo tanora Nizeriana maro dia hifindra any Lagos ho zatovo, toy izany koa ny West. Rehefa tonga tany Lagos i West, dia niezaka nitazona andian-jiolahimboto tao amin'ny distrikan'i Shomolu, tovovavy iray mampidi-doza, izay tandrefana no mifanitsy amin'ny Bronx, New York City. Amin'ny teniny ...
'Ny andian-jiolahy ao an-toerana dia fantatra amin'ny anarana hoe Zavona. Niaraka tamin'izy ireo na niady tamin'izy ireo ianao, ary nihevitra aho fa tsara kokoa ny manàna azy ireo ho namana toy izay fahavalo. Ny fitrandrahana ny andro, ny ady, ny zava-mahadomelina ary ny muggings. Hataonay vetivety ny olona eny an-dalambe. '
Tandrefan'i Lagos tamin'ny taona lasa teo noho ny heloka bevava fony izy mpanakanto. Izy koa dia nanatanjaka ny lazany tamin'ny nilalaovany baolina an-dalambe. Ary avy eo ... Indray andro, rehefa niverina nidina an-dalambe iray sy ny kitapo nangalariny izy sy ilay namany akaiky indrindra, dia nanatona mpangalatra iray mpifaninana izy ireo, izay nitaky ny vola. Taorian'ilay andian-jiolahy mpifaninana amin'ny vola. Ny naman'i West dia nandà ny handefa ny kitapom-bola. Nokapohina sy novonoina teny an-dalambe izy niaraka tamin'ny namany namany tsy manam-pahefana hanampy azy.
Nandositra niaraka tamin'ny vola i Taribo West ary niverina tany amin'ny reniny tao Port Harcourt. Taorian'ny nahitàn'ilay vazivazin'ny gangsterista, dia nanapa-kevitra ny hanokana ny hery feno amin'ny baolina kitra izy.
Taribo West Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Rising to Fame
Tany Port Harcourt, ny West dia nanomboka tamin'ny Obanta United. Taorian'ny fankaherezana an'ireo mpankafy tao amin'ny fampirim-bahiny tao an-toerana, dia hita tamin'ny alatsinainy lasa teo ny Sinclair tamin'ny alàlan'ny scout izay nanangona azy ho mpilalao baolina kitra Sharks. Nanohy ny lalao tamin'ny Obanta United tao 1989 izy, talohan'ny niverenany tany Sharks tao amin'ny 1990. Avy any Sharks izy dia nandeha nilalao ho an'ny Rangers Enugu tao 1991, alohan'ny hidirana amin'ny Julius Berger ao amin'ny 1992 araka ny hita ao amin'ny sary etsy ambany.
Taorian'ny fisedrana nahomby tao amin'ny 1993 tany am-boalohany, ny West dia nanatevin-daharana ny Frantsay Auxerre tarihan'i Guy Roux. Telo taona taty aoriana dia lasa mpikambana ao amin'ny ekipa olaimpika izay nahazo medaly volamena tamin'ny Olympika Summer Olympics izy. Ny West no nilalao isa-minitra nandritra ny fifaninanana. Nanjary mari-pamantarana ho an'ny mpiaro tsy misy dikany ny lokony mamirapiratra. Volo no hitanao teny amin'ny ilany hafa.
Raha nanao zava-mahagaga ny volony, toy izany koa ny fihenjanana sy ny fikorontanan-drivotra mafy indrindra indrindra rehefa nilalao ho an'ny tanindrazany izy.
Ny fandresena ny Lalao Olaimpika dia nitarika ny Inter Milan hiantso ny tolotr'izy ireo. Tany Inter dia nilalao izy Diego Simeone AKA Cholo ary Ronaldo Luís Nazário de Lima.
Nanjary mpandresy tamin'ny UEFA i West satria nitarika ny lalao fiarovana Nerazzurri izy mba handresy ny trosany izay nolazainy fa tonga tamin'ny fombafomba nataony tamin'ny mpitsabo mpaneso tao Nizeria.
Taorian'ny fahombiazany tany Italia, nanapa-kevitra ny West ny handany fotoana iray any amin'ny faritr'i Derby, manampy amin'ny fitazonana azy ireo ao amin'ny Ligue Premier, Kaiserslautern any Alemana. I Taribo dia nanana asa izay nitondra azy manerana izao tontolo izao, na i Iran, miaraka amin'ny fijanonana maromaro any Eoropa eny an-dalana. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Taribo West Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Aterin 'ny mpilalao Nizeriana mpilalao ao amin'ny Olympics 1996, nisy vehivavy tsara na sipa lehibe, na izany no fitenenana. Ho an'i Taribo West, nisy ankizivavy mpanao banky mahafinaritra iray antsoina hoe Adenuke izay nanova ny vadiny tatỳ aoriana.
Ny lanonam-panambadian'izy ireo dia tsy azo lavina fa iray amin'ireo nalaza indrindra tamin'ny fotoana noraisiny. Ny lisitry ny planina sy ny lisitry ny vahiny dia nanavaka azy tamin'ny horakorin'ireo fety fampakaram-bady natao tao anatin'ny fe-potoana iray hafa. Na izany aza, tapa-bolana taorian'ny nanafahan'izy ireo ny fehikibo nipetrahana, dia nisaraka ny mpivady. Nitranga izany noho ny fiampangana sy ny fanoherana ny tsy fifankahazoana.
Herinandro tato anatin'ny fanambadiana, ny tontolon'ny haino aman-jery dia mitebiteby amin'ny filazan'i Atinuke avy amin'ny tarihin'i Taribo noho ny tsy firaharahany ny adidiny amin'ny fanambadiana tsy voafetra ho an'ny baton'ny vadiny. Taribo, kosa etsy ankilany, dia nanoritsoritra ny fanambadiana ho toy ny tebiteby, voapoizina noho ny ahiahy, ny fankahalana ary ny fitiavana. Nampangainy ihany koa i Atinuke amin'ny tsy fifankahazoana sy ny tsy fahampian'ny fanoloran-tena amin'ny voadim-panambadiana. Tonga tao anatin'ny fotoana iray i Atinuke indray mandeha tsaho mba hampiaraka ny banky malaza fony izy niasa tamin'ny banky malaza iray nandritra ny Nizeria.
Ny tsy fitoviana eo amin'ny roa tonta dia tsy azo heverina ary samy nandeha tany amin'ny fitsarana mba hisara-panambadiana izy ireo. Raha voalaza fa nitarika ny asa pastoraly ho amin'ny ambaratonga manaraka ao Taribo i Taribo, dia nifindra toerana indray i Atinuke.
Taribo West Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Mampiasa Charms sy Babalawos
Ny West dia niaiky tamin'ny fandoroana labozia sy ny fitazonana vato magikana izay azony tamin'ny mpitsabo mpanamboatra Witch talohan'ny lalao. Nandeha lavitra kokoa izy nilaza fa matetika ny ankamaroan'ny mpilalao sy ny mpanazatra no tsy manana ny hetsiky ny dokotera mpitsabo. Raha nanontanian'i Tana Ayejina, mpilalao ara-panatanjahantena ho an'ny gazety Nigerian Punch raha nandray anjara tamin'ilay hetsika izy raha mbola mpilalao baolina kitra, dia namaly tamim-pahamarinana izy YES!. Amin'ny teniny ...
"Mazava ho azy, eny, tsy fantatro hoe maninona ny olona no mandà hiresaka momba ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny firaiketam-po. Ny football dia misy ifandraisany amin'ny fahefana be. Rehefa misy hetsika goavana, mijery ny kianja ianao, mahita olona, ​​mpankasitraka mitaky karazan'olona rehetra; ombiasy misy, voodooists ao. Tamin'ny andro nilalaovako, rehefa tsy nahalala aho dia nahazatra ahy mallams ary babalawos (mpitsabo nentim-paharazana) mba hahatonga antsika ho sariaka ho antsika, izay nalaintsika tany amin'ny tobim-pitantanana. Indraindray dia niasa izy, indraindray tsy nanao izany.
Amin'ny kliibe sasany, alohan'ny lalao rehetra, ny filoha na ny mpitarika ny klioba dia hanome vintana tsara ho anao hilalao. Izy ireo no hilaza aminao hoe ataovy ao anaty kiraro na kiraro ary milalao. Izany no finoan'ny finoanoam-poana; fa afaka manampy azy ireo hahazo ny lalao.
Misy mpanazatra sasantsasany mifandray amin'ireo mpilalao afrikanina sy mpanebaka avy any Senegal, Borkina Faso, Zaire na i Nizeria mihitsy aza. Ireo olona ireo dia nodinihina mba hanomezana ny vokatra lalao ho an'ireo mpanazatra ireo alohan'ny hanaovana ny lalao. Ireo olona ireo dia mahita zavatra hafahafa ary afaka milaza aminao ny mahagaga sy ny sangisangony izy ireo, ary inona no ho vokatr'io lalao io. Mino sy mampiasa azy ny olona. Miasa ho an'ireo izay mino izany. Hitako izany, niaina izany aho, niaraka tamin'ny mpilalao izay nampiasa izany ary nampiasaiko izany. Noho izany, nahoana ny olona no mandà izany? Misy sangisangy sy fombafomba amin'ny baolina kitra. Mbola misy. "
Taribo West Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ahoana no nahatonga azy ho niova fo?
Rehefa namangy tampoka ny fitsidihany tany an-tranony tany Milan ny anabavin'i West, antsoina hoe Patience izay evanjelista. Araka ny filazan'ny West azy;
'Nosokafako ny varavarana, ary talohan'ny nahafahako niteny fa faly aho nahita azy, dia hoy izy:' Tokony ho matanjaka ianao hiaina ao an-trano toy ity. ' Nolazainy tamiko fa nanana aur bad ny trano, ary nanontaniany ny karazana fombafomba nataoko. Nanaiky ny fanambarany i Taribo West ary nilaza izy fa ... "Raha tsy naman'ny anabaviko izy, dia nariako izy."
Toy ireo mpilalao baolina maro dia tena nino ny finoany izy. Ny anabaviny izay vehivavin 'Andriamanitra dia nanambara taminy fa afaka mahatsapa hery avy any an-danitra izy ary nilaza fa afaka mahita alika roa izy: fotsy iray fotsy ary mainty iray - niady taminy tao an-tranony. Izany dia rehefa nanampy ilay mpilalao baolina kitra ao Taribo. Tsy dia nanam-paharetana tamin'ny teniny izy ary nilaza taminy haingana fa tokony hiofana izy. Naharitra ela ny faharetana raha tsy niverina avy niofana ny anadahiny. Nanomboka nivavaka tamin'Andriamanitra izy mba hanova ny rahalahiny.
Rehefa niverina avy tamin'ny fampiofanana i West, dia nanana vaovao marobe ny anabaviny. Raha iny izy nivoaka iny, dia natory izy ary nanana nofinofy mazava tsara, nilaza tamin'i Taribo West fa nantsoin'Andriamanitra hiala ny lalan-dratsiny izay nanononany ny zavatra nofinofiny momba azy ary nanohy nampitandrina azy momba ny vokatry ny asany.
'Fantatro tamin'izay fa nila ny fanampian'Andriamanitra aho' Ny feon'ny fieritreretan'i West dia nibaboka azy. Nandohalika niaraka tamin'ny anabaviny izy ary samy nanomboka ny vavaka. Rehefa nivavaka izy ireo dia nanomboka nisokatra sy nanidy ara-panahy ireo mpandeha an-trano. Taribo indray indray no nitantara ...
'Nieritreritra aho fa mety ho rivotra fotsiny ihany, fa rehefa nieritreritra an'izany aho, dia nanomboka nikiakiaka koa ny varavarana rehetra. Toy ny zavatra avy amin'ny sarimihetsika ratsy, saingy fantatro fa zava-misy izany. Nahatsapa hafanana mafana aho. " Tamin'izay dia nitodika tany aminy ny rahavaviny ary niteny hoe: "Taribo, nilaza ny Tompo fa ho pasitera ianao".
Tamin'izany no nahazoany anaram-bosotra 'Pastor' araka izay nolazainy tamin'ny rehetra mba hanombohana azy hiantso azy. Ny rahavaviny dia nanome baiko ny mpitoriteny iray monina any Londres, Pastor Ayo Don-Dawodu, izay nanamafisany ny finoan'ny Tandrefana sy nandresy lahatra azy mba hanorina azy Fialofana amin'ny asa fanompoana ao amin'ny Storm tany Affori, faritra avaratr'i Milan.
Taribo West Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fepetra takiana amin'ny pastora
Hatramin'ny niovan'ny anabaviny, dia nanomboka nanakorontana ny devoly avy hatrany ny mpiaro ny Nizeriana teo aloha ary nahazo fandresena ho an'i Jesôsy tany Italia.
Tsy ela dia nifindra tany Lagos Nigeria i Taribo West mba hanangana sampana misy an'i Milan Fialofana ao amin'ny The Storm Miracle Ministries ny firenena rehetra. Andramo azonao atao, tsy azonao an-tsaina mihitsy Mario Balotelli manaraka ny lalana mitovy amin'izany any Ghana.
Na dia an-taona maro taorian'ny fisotroan-dry zareo avy amin'ny baolina kitra aza, nanohy nanangona mpanjohy mahery i Taribo tamin'ny fikarakarana kruste mahery (sary etsy ambany) tao Ajegunle, tanàna malaza nizeriana izay ny tanjon'izy ireo dia ny hamadika ireo mpangalatra izay niaina ny fomba fiainany teo aloha. Taribo afaka nanangona $ 2million mba hamatsiana ivon-toerana maharitra ho an'ireo eny an-dalamben'i Ajegunle.
Fantatry ny rehetra fa nalala-tanana be izy ary nibanjina ny vahoaka. Amin'ny ankapobeny, raha tsy mamorona adiresy ho an'ny crusades, Taribo dia misokatra ho an'ny fisokafana araka ny hita eo amin'ny sary etsy ambany.
Taribo West Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Andro farany mampalahelo
Tamin'ny volana 2007 tamin'ny Janoary dia akaiky ny sonia tamin'ny klioba Kroaty Rijeka, saingy tsy nahomby ny fitsaboana azy. Nifindra tany Iran izy tamin'ny farany ary nanasonia fifanarahana iray taona tamin'i Paykan tamin'ny volana 2007. Tsy nahavita ny fanombohana ny klioba ny Tandrefana, ka nahitana ny fifanekena nifanaovana tamin'ny fifanarahana iraisam-pirenena telo volana taorian'izay. Tamin'ny volana febroary 2008, voalaza fa voalaza fa tafiditra ao amin'ny klioba Segunda División Xerez, saingy nolavin'ny filohan'ny klioba ny fahalalany ny fahatongavany.
Taorian'ny fisotroan-dronono, nilaza ny West ...'Handeha ho any Milan aho ary ho mpitandrina matihanina.' hoy izy. 'Tsy misy fomba ahafahako ho mpanazatra. Ity no fiafaran'ny baolina kitra ho ahy ' Mihomehy ny eritreritra izany izy.
Taribo West Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ady amin'ny taonany
Tao amin'ny 2010, dia nisy nitatitra fa ny andrefan'i Nizeria andrefana, toy ny Jay-Jay Okocha, Nwankwo Kanu ary Obafemi Martins, farafahakeliny fito taona fara fahakeliny noho ny filazany. Tamin'ny April 2013, Žarko Zečević, sekretera jeneraly taloha tao Partizan, dia nilaza fa i West dia 12 taona efa antitra noho ny taona nitondrany. Fotoana fohy taorian'izay, nolavin'i West ny fiampangana.
Zarko Zecevic nilaza ny gazety Serba Vecernje Novosti: "Niantso anay [West] fa hoe 28 izy. Taorian'izay dia fantatsika hoe izy no 40, saingy mbola milalao tsara izy, noho izany dia tsy manenina aho manana azy ao amin'ny ekipa. "
FACT CHECK: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Taribo West momba ny tantaram-pianakaviana sy ny zava-misy marina momba ny biographie. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
Marcelo Brozovic Tantara momba ny fahazazana plus Untold Biography Facts
Tantara Krzysztof Piatek Childhood plus Untold Biography Facts
Ny tantaran'i Klaas-Jan Huntelaar momba ny tantaram-pitiavam-pitiavam-bazana mbola tsy fantatra
Santiago Solari tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Romelu Lukaku Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Daty efa namboarina: 24 septambra 2020
Leonardo Bonucci ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Philippe Coutinho tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pahaterahana
Mateo Kovacic tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa
Ricardo Kaka tantaran'ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa
Odion Ighalo Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra